Alaabooyin Cusub Ayaa Imaanaya
Dhawaan shirkadeenu waxay maalgashi ku sameysay USD500,000 waaxda R & D ee alaabteena cusub: bamka biyaha yar yar ee mashiinka jeermiska dila, bamka faakiyuumka ee hawo-mareenka, bamka biyaha kulul ee bilaa burushka ah, bamka bamka biyaha kiciya ee yar yar ee qubeyska qubeyska pum ...
Marka loo eego deegaanka dabiiciga ah, cufnaanta kalluunka ku jira aquarium-ka aad bey u weyn tahay, kalluunka saxarada iyo hadhaaga cunnaduna waa ka sii badan yihiin. Kuwani waxay jajabiyaan oo sii daayaan ammonia, oo si gaar ah waxyeello ugu leh kalluunka. Qashinka badan, ammonia badan ayaa soo baxa, iyo f ...
Marka loo eego xaaladaha hawlgalka, qaboojiyaha hawadu waxaa loo qaybin karaa qawaaniinta gacanta iyo sharciyeynta otomaatiga ah. 1) Habka hagaajinta gacanta waa inuu hagaajiyo xuduudaha hawlgalka ee marawaxadda ama xiraha qalliinka gacanta, sida furitaanka iyo xiritaanka marawaxadda ama beddelidda xagalka baalka,
Isbedelka Kobcinta Bamka Biyaha ee Aquarium iyo Bamka Biyaha Solar
Sida shirkadda YUANHUA, waaxdeena R & D ayaa had iyo jeer soo saarta alaabooyin cusub, oo buuxiya shuruudaha macaamiisha kala duwan ee suuqyada gudaha iyo dibaddaba. Waxaan la yaabnay, oo uu saameeyay fayraska cusub ee taajku, warshadaha ilaha farshaxanka aquarium iyo baahida suuqa qorraxda ayaa xoog badan sannadkan, iyo ...